The Lockheed C-5 Galaxy bụ a arọ agha iga ugbo elu nke USAF mere site US ugbo elu emeputa Lockheed.
Nke a bụ ihe FSX/P3D mmelite maka Alphasim Lockheed C-5 Galaxy. Ihe ngwugwu a gosipụtara VC gbanwetụrụ ma weliewanye anya nke nwegogogogogogogoro karịa VC ndabara. Ogwe ahụ edozila windo popup maka autopilot na ọkwa ndị ọzọ. Na mgbakwunye, nnukwu ndozi anọ sitere n'aka ndị edemede dị iche iche gụnyere na ngwugwu.
Ọzọkwa, The ugbo elu nwere ugbu a ọhụrụ anwụrụ ọkụ mmetụta (aka i aka). Original nlereanya site Alphasim, repaints site amaghị authors, igwefoto echiche site Erwin Welker na ọhụrụ panel mgbanwe na anwụrụ ọkụ pụrụ isi kwuo ya site Michael Pook.
Onye edemede: Alphasim, Erwin Welker, Michael Pook